Google dia nanambara fa ny sivana hatsaran-tarehin'ny fakantsary dia manimba ary mampandeha azy ireo amin'ny alàlan'ny default | Androidsis
Ny mpanamboatra finday avo lenta rehetra dia misy andiana fiasa voafetra voafetra ao amin'ny tobiny, amin'ny alàlan'ny sosona fanaingoany. Raha ny fakantsary, ny rehetra, ny rehetra, ampidiro ary ampio ny sivana hatsaran-tarehy, sivana manalefaka ny tsy fahalavorarian'ny tarehy toy ny ketrona, mony, mony ...
Na eo aza ny adihevitra izay naterak'ity karazana sivana ity indraindray, dia manohy mampiditra azy ireo hatrany ny mpamokatra rehetra. Ny hany nanova ny sainy dia Google, izay nanambara izany ny terminal rehetra ao amin'ny elanelan'ny Pixel dia hanafoana io asa io amin'ny alàlan'ny default.
Google dia nilaza fa ny fanadihadiana isan-karazany dia milaza fa io fampiasa io dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny sain'ny mpampiasa. Mba hisorohana an'io dia nanapa-kevitra ny hanala azy io amin'ny fomba natoraly izy ary manentana ireo mpanamboatra hafa hanaraka io lalana io ihany. Ao amin'ny bilaogin'i Google izay nanambaran'ny orinasa an'ity fanovana ity dia afaka mamaky isika:
Niainga izahay mba hahafantatra tsara kokoa ny fiantraikan'ny sivana selfie amin'ny fahasalaman'ny olona, ​​indrindra rehefa alefa tsy mandeha ny sivana. Nanao fandalinana marobe izahay ary niresaka tamin'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana zaza sy saina eran'izao tontolo izao, ary hitanay fa rehefa tsy fantatry ny fakantsary na fakantsary fakana sary ny sivana dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamana ara-tsaina ny sary. Ireo sivana tsy misy dikany ireo dia afaka mametraka fari-pitsarana mangina ampitahaina amin'ny olona sasany.
Ho fanampin'ny fahazoan-dàlana hamonoana ireo mpanivana amin'ny alàlan'ny default, mamporisika azy ireo ihany koa izy ajanony ny fampiasana teny toa hatsaran-tarehy, fanatsarana, ravaka, retoque… Satria ireo teny rehetra ireo dia midika fa mila fanatsarana ny sary. Ny teny tokana amporisihan'i Google hampiasa dia Retouch tarehy.
Google dia hanavao ny fampiharana Google Camera vetivety mba hanesorana ny sivana default izay misy ary dia hanampy ny safidy Face Retouch. Rehefa mampiasa an'io safidy io ny mpampiasa dia haseho hafatra izay mampahafantatra amin'ilay mpampiasa fa izany indrindra no ataon'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google dia nanambara fa ny sivana hatsaran-tarehin'ny fakantsary dia manimba ary tsy mandeha izy ireo raha tsy atao izany
Ny andiany Reno4 an'i Oppo dia natomboka tany Eropa ihany tamin'ny farany, ary fanomezana maimaim-poana!